Andriamifidisoa Zo · Marsa 2011 · Global Voices teny Malagasy
Andriamifidisoa Zo · Marsa, 2011
Translation Editor · Nanomboka nandika tamin'ny 11 Septambra 2007 · 2671 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Andriamifidisoa Zo tamin'ny Marsa, 2011
Venezoela: Mitombo ny tranga-na gripa AH1N1
Mandia fotoan-tsarotra hafa indray ny Venezoelana amin'izao fotoana izao; tonga ny gripa AH1N1, araka ny voalazan'ny minisitry ny fahasalamana avy amin'ny fitondrana revolisionera hita ao amin'ny pejy ofisialy dia niainga avy tany amin'ny faritanin'i Mérida tany amin'ny tapaky ny volana marsa tany ho any ity valan'aretina ity. Misy kosa anefa ny filazana...
Ejipta: Baolina kitra (fandaka) nialoha sy taorian'ny Revolisiona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Marsa 2011
Nandritra ny taona vitsivitsy izay, ny baolina fandaka na football (soccer) no loharanon-kafalian'ny Ejipsiana voalohany. Ny ekipam-pirenena Ejipsiana no efa nahazo ny amboaran'i Afrika intelo misesy notontosaina tany Ejipta, Ghana ary Angola. Mandritra ny fifaninanam-pirenena moa dia mahazatra ny mahita ny olona mifantoka lalina eo anoloan'ny vata fahitalavitra, vonona miaraka amin'ny...
Qatar: Rahona artifisialy mitatao ny Kianja
Nanosika ilay firenena kely saingy manankarena halaza indray ny fisian'ny tetikasa iray hamoronana fitaovana mamorona rahona vitan'olombelona azo baikoan-davitra, mandeha amin'ny herin'ny masoandro entina hampangatsiatsiaka ny eny an-kianja. Efa herinandro izay ny gazety The Peninsula no nanoratra azy ity an-tselika misy tsanganana telo mitantara ny fikarohana ataon'ny ao amin'ny Anjerimanontolon'i...
Zeorzia: Mpanao gazety voaroaka fa niteny fankahalana tao @ Facebook
Azia Afovoany sy Kaokazy 28 Marsa 2011
Ny 18 Marsa 2011 dia nandroaka ny roa tamin'ny mpanao gazetiny ny Fampielezam-peom-panjakana Zeorziana, dia i Giorgi Tukhareli sy i Giorgi Gabrichidze, noho ny teny fankahalana olona mitia mitovy fananahana aminy sy ny fankahalana an'i Vatikana sy ny Fiangonana Katolika, nosoratany tao amin'ny Facebook. Nisy fanamarihana nosoratan'ireo mpanao gazety ireo...
Ejipta: Hitan'ilay mpamily Taxi tamin'ny alalan'ny facebook ny tompon'ny fakantsary very
Ejipta 25 Marsa 2011
Inona no mety ataonao raha mahita fakantsary ianao, ka hamerina azy amin'ny tompony? Tamin'ny fomba ejipsiana no nanaovan'ilay mpamily taxi ejipsiana iray azy ka nampiasa ny aterineto izy - ary nivaly vetivety izany.
Maraoka: Diabe nilamina nanerana ny firenena
Nidina an-dalambe isan-kerinandro, tahaka ny Toniziana sy ny Ejipsiana, ny Maraokana ny volana Febroary 2011, mitaky ny hanovana Lalampanorenana sy ny fametrahana rafitra demokratika parlemantera. Nisy ary ny Diabe am-pilaminana notontosaina ny Alahady 20 marsa nanerana ny firenena. Voatatitra tamin'ny alalan'ny aterineto, hita ao amin'ny Twitter, Facebook ary ny Youtube ny isa-minitran'izany diabe izany.
Bahrain: Diary an-dahatsary ny herisetran'ny polisy
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Marsa 2011
Raha mbola mitodika any Libya ny haino aman-jery sy ny fihodin'ny tantara any, dia mamely mafy ny mpanao fihetsiketsehana mitady demokrasia kosa ny ny fitondrana any Bahrain. Dimy no maty ny alarobia raha nanafika ny mpanohitra ny fitondrana izay nivory teo amin'ny tsangambato boriborin'i Pearl (Lulu) ao an-drenivohitra Manama ny...